Dardaaranka Hore - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Xuquuqda Xubinta iyo Asturnaanta > Dardaaranka Hore
Baro ikhtiyaariyada daryeelkaaga haddii aad la kulanto hoos u dhac caafimaad maskaxda, jirro lama filaan ah, ama shil.
Dardaaranka hore waa hagitaan caafimaad oo qoran. Waxay sharraxayaan noocyada daryeelka aad rabto inaad hesho haddii ay wax dhacaan oo kaa dhigaya inaadan gudbin karin waxyaabaha aad rabto.
An dardaaranka hore Waxay u oggolaanaysaa dhakhaatiirta iyo qoyska inay ogaadaan noocyada daryeelka aad samayso (oo aadan rabin) haddii aad:
Mar dambe ma sameyn karo go'aannada daryeelka caafimaadka
Ka walaac in caafimaadkaaga maskaxdu uu hoos u dhaco oo uu saameyn ku yeesho awooddaada aad ku gaari karto go'aannada daryeelka mustaqbalka
Uma sheegi kartid dhakhtarkaaga ama qoyskaaga nooca daryeelka aad rabto sabab kale
Markaad mid hesho: Dhammaan dadka waaweyn waa inay lahaadaan dardaaran hore. Cuduro halis ah iyo shilal ayaa si lama filaan ah u imaan kara. Waa wax cabsi in laga fekero, laakiin dardaaranka hore ayaa ka caawiya kuwa aad jeceshahay inay gaaraan go'aannada daryeelka haddii kuwa ugu xun ay dhacaan.
Tilmaamaha Hore iyo Amarada Dhakhtarka ee Daryeelka Nolol Waara (POLST)
Rabitaanka nolosha iyo awoodda qareen ee waara
Gobolka Washington, waxaa jira laba nooc oo ah dardaaranno hormaris ah: doonista nolosha iyo awoodda qareennimo ee waarta. Kuwani waa noocyo gaar ah oo ah dardaaranno horumarineed oo daboolaya baahiyaha qaarkood:
Dardaaranka daryeelka caafimaadka (sidoo kale loo yaqaan "doonista nolosha") waa tilmaamo qoran oo ku saabsan daryeelka caafimaad ee aad rabto inaad hesho dhammaadka noloshaada.
Markaad mid hesho: Dadka da'da ah, iyo sidoo kale kuwa qaba cudurada aan dhamaadka lahayn, waxaa laga yaabaa inay rabaan dardaaran daryeel caafimaad ama dardaaran nool.
The Amarada Dhakhtarka ee Daaweynta Nolol Joogtada ah (POLST) foomka waa ikhtiyaar qofkasta oo qaba xaalad caafimaad oo daran una baahan go'aan ka gaadhida daaweynta nolosha ilaalinaysa. Si ka duwan tilmaamaha kale ee liiskan ku qoran, foomka POLST ayaa ka kooban amarro caafimaad oo gaar ah.
Awoodda qareen ee waara
Awoodda waarta ee qareenka ayaa magacaaba qof kale oo adiga go'aan kuu gaari kara haddii aadan awoodin inaad adigu sameysid. Foomkani waa dukumiinti sharci ah waana inay saxeexaan nootaayo dadweyne.
Markaad mid hesho: Awoodda qareen ee waara waa ka dabacsan tahay dardaaranka nolosha, maadaama aysan kaliya la xiriirin daryeelka dhamaadka-nolosha. Mid qaado haddii:
Waxaad leedahay qof noloshaada ka mid ah oo aad ku kalsoon tahay inuu kuu sameeyo go'aanno caafimaad haddii ay dhacdo inaadan awoodin.
Waxaad la tacaalaysaa xaalad saameyn ku yeelan karta ama saameyn ku yeelan doonta awoodaada inaad u sheegto dhakhaatiirta waxaad rabto.
Hadaad ubaahantahay ama rabto labada dardaaran daryeel caafimaad iyo awooda qareenka waarta, labadaba waad heli kartaa.
Xuquuqdaada iyo kheyraadkaaga dardaaranka hore
Waxaad leedahay qaar xuquuqda oo la xidhiidha dardaaranka hore:
Dhakhtarkaaga ama isbitaalkaaga ayaa ku siin kara macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dardaaranka hormariska ah haddii aad weydiiso. Waxaad sidoo kale waxbadan ka baran kartaa la xiriirida Community Health Plan ee Washington 1-800-440-1561 (TTY 711) Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 5 galabnimo
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 21, 2022